Manakatona an'i Walmart?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Manakatona an'i Walmart?
Aprily 19, 2020
Coronavirus no fanamby lehibe indrindra lalovan'ny ankamaroan'ny olona. Inona no mety hitranga any Etazonia raha tsy misy fidirana amin'ny Walmart sy Sam's Club? Afaka mijanona misokatra ve i Walmart? Afaka mijanona misokatra ve ny Sam's Club? Sam's Club dia ao amin'ny Walmart. Afaka misokatra foana ireo magazay, saingy saron-tava 30 tapitrisa no takiana isam-bolana.
Andro vitsivitsy lasa izay, Rita Marie dia nandefa hafatra tamin'ny twitter nanontany an'i Walmart sy Sams Club: ho fiarovana ny mpiasa sy ny mpanjifanao dia tokony hitaky ny hisaronan'ny karazana tarehy sy fonon-tànana ny mpanjifa rehetra ary tokony hanao fanambarana any amin'ny fivarotanao ho an'ny vahiny rehetra ianao mitazona ny halaviran'ny 6ft.
Henon'i Walmart ny fampiakarana azy, na dia tsy afaka nosedraina tamin'ny fomba lehibe aza ny olan'ny filoha Donald Trump - tsy dia misy fitsapana akaiky akory.
Walmart dia hanafatra ny mpiasa amin'ny endriny. Mety tara loatra izany amin'ny faritra maro any amin'ny faritra atsinanan'i Etazonia ary tsy fantatra ny tena fahombiazany. Tsy vahaolana tena izy ny fanaovana sarontava vita an-trano, famoizam-po amin'ny fotoana tsy nanomanan'ny governemanta sy i Walmart izany loza izany. Iray volana lasa izay dia nilaza tamin'ny olona ny tompon'andraikitra mba tsy hanahy ny amin'ny saron-tava. Tsy noho izy ireo tsy tokony niahiahy akory, fa tsy nisy sarontava fotsiny ary ny famoronana horohoro no tsy hetsika tsara indrindra.
Tamin'ny 27 martsa ny filoha Trump dia nidera an'i Walmart tamin'ny nanolorany ny toeram-piantsonan'izy ireo ho fitsapana be dia be ho an'ny rehetra. Mazava ho azy fa tsy nitranga izany. Tsy misy fitsapana azo atao.
Tamin'ny 6 aprily Walmart dia namoaka tao amin'ny tranonkalany: “Manao izay rehetra azonay atao izahay mba hanamafisana orina ny vondron'olona misy anay, ny namantsika ary ny mpiara-miasa aminay. Mandray fepetra fisorohana izahay mba hitazomana ny fivarotanay ho madio sy hitazomana tontolo iainana mahasalama. Hiara-handroso amin'izany isika. ”
Raha tsy maintsy mihidy ny magazay kely, miditra amin'ny fatiantoka manimba fianakaviana amerikana miasa mafy, ny mpivarotra ambongadiny toa an'i Walmart dia misokatra ary manambola mandritra ny COVID-19.
Mazava ho azy fa zava-dehibe ny fitazonana ny famatsiana hitohy, fa maninona raha avela hijanona misokatra ny fivarotana fananan'olon-tokana ary orinasa goavambe ananan'ny miliardera ihany? Tsy rariny ity tontolo ity.
Tombanana fa mila saron-tava 30 tapitrisa isam-bolana i Walmart. Enga anie ka ho ampy ny scarf vita tanana sy tarehy hafa - misy sarony. Mety tsy dia nanisy fiovana firy izy ireo, saingy tsara ho an'ny gazety izany. Ny safidy hafa dia ny fanakatonana ny Walmart na ny Sam's Club na izy roa aza.
Tokony hisokatra malalaka ve i Walmart sy i Sam's Club Walmart?
Ny faritry Grand Island ao Nebraska dia toerana mafana indrindra an'i Nebraska. Manana tahan'ny aretina azo ampitahaina amin'ireo fanjakana voa mafy indrindra eto amin'ny firenena izy io. Tsy ny manodidina ny Hall County ihany izao no manana tranga betsaka kokoa noho ny any amin'ny distrikan'i Nebraska, fa ny tahan'ny tranga isam-batan'olona ihany koa dia 12 heny noho ny an'ny Douglas County ary mihoatra ny 25 heny ny an'ny Lancaster County, fanadihadiana World-Herald hita. Mpamaky iray no nibitsika avy tao amin'ny Grand Island nanentana ny governora: TENA ... ianao dia “mangataka ny hisaron-tava” ??? Maninona ianao no tsy tonga manantona andro any Grand Island… Sams Club, Walmart, Super Saver… tsy misy sarontava, tsy misy elanelana ara-tsosialy, ankizy na aiza na aiza. Ampitomboy ary karakarao ny fanjakanao manontolo… aza mijanona mangataka sy manome alalana ny filaminana any an-trano ho an'ny GI sahady. ”
Rita Marie nibitsika tamin'i Walmart: Ho fiarovana ny mpiasanao sy ny mpanjifanao dia tokony hotakinao ny mpanjifa rehetra mba hisaron-doha sy fonon-tànana ary tokony hanao fanambarana any amin'ny fivarotanao ho an'ny vahiny rehetra hitandrina ny elanelany 6ft.
Namaly i Walmart androany ka nandidy ny mpiara-miasa aminy rehetra handeha amin'ny dingana manaraka.
Ity ny hafatra nalefa tamin'ny mailaka tamin'ny mpiasa Walmart rehetra. Sam's Club dia ao amin'ny Walmart, saingy mitaky saram-pandraisana anjara ho an'ireo mpiantsena miantsena.
John furner, filoha ary Lehiben'ny mpanatanteraka - Walmart US sy Kath McLay, filoha sady Lehiben'ny mpanatanteraka - Sam's Club nanoratra hoe:
Nandritra io areti-mandoza io dia ny fahasalamanao sy ny fiadananao no laharam-pahamehanay. Vao iray volana lasa izay no nanambarantsika ny COVID-19 politika fialan-tsasatra maika, ary nanomboka teo dia naka izahay dingana bebe kokoa hiarovana anao, ny mpanjifantsika ary ny mpikambana ao aminay miaraka amin'ny fitarihan'ny tompon'andraikitra amin'ny fanjakana sy ny marary eo an-toerana, ny Centers for Disease Control (CDC), ary koa ny Chief Medical Officer anay.
Androany, mizara dingana iray hafa izahay: hanomboka hitaky ny hanaovan'ny mpiara-miasa sarontava na saron-tarehy hafa izahay any am-piasana. Ao anatin'izany ny magazay, ny kliobanay, ny ivon-toeram-pizarana sy ny fanatanterahana ary koa ny biraon'ny orinasa. Hampahery ny mpanjifa sy ny mpikambana koa izahay hitafy saron-tarehy rehefa miantsena miaraka aminay izy ireo.
Nanatsara ny politikanay momba ny firakofana tarehy izahay, tsy voatery alefa amin'ny adidy satria efa niova ny torolàlana momba ny fahasalamam-bahoaka. Manoro hevitra ny CDC ankehitriny ny hisaron-tava amin'ny toerana ampahibemaso, ao anatin'izany ny fivarotana enta-madinika, mba hanakanana ny fihanaky ny viriosy. Na dia tsy manome baiko ny fampiasana sarona tarehy amin'ny toerana ampahibemaso aza ny ankamaroan'ny fanjakana sy ny governemanta eo an-toerana, nitatitra ny CDC fa ny fanadihadiana natao tato ho ato dia mampiseho ampahany betsaka amin'ny olona manana virus tsy ampy soritr'aretina ary afaka mamindra ilay virus. Miaraka amin'ity fahalalana ity, mino izahay fa hahasoa ny tsirairay fotsiny ny mampiasa sarontava na saron-tarehy mba hamehezana ny fihanaky ny aretina.
Manomboka amin'ny Alatsinainy dia takiana aminao ny hisaron-tava any am-piasana. Azonao atao ny manome ny anao raha mbola mifanaraka amin'ny torolàlana sasany izany, na hanome anao iray izahay rehefa mandalo ny efijery fahasalamana sy ny mari-pana momba ny mari-pana. Fantatray koa fa mety misy ny maningana an'io politika io mifototra amin'ny lalàna eo an-toerana sy ny filan'ny tsirairay momba ny fahasalamana.
Manantena izahay fa ity dingana ity dia hampiroborobo ny fiarovana sy ny tsy fitoviana manerana ireo fampitaovana rehetra ananantsika ary hampionona ny mpanjifantsika sy ny mpikambana ao aminy. Na izany aza, zava-dehibe ny mahatadidy fa ny fisaronan'ny tarehy dia fisorohana fahasalamana fanampiny fotsiny. Izy ireo dia tsy manome toky ny amin'ny fiparitahan'ity virus ity, ary tsy manolo ny ankamaroany dingana lehibe azonao atao ny mitazona ny tenanao sy ny hafa ho voaro: 6-20-100. Na any am-piasana na any an-toeran-kafa, manaova fanazaran-tena enina metatra miala ny fiaraha-monina raha azo atao. Sasao tsy tapaka ny tananao amin'ny savony mandritra ny 20 segondra. Ary raha manana mari-pana 100 degre na avo ianao dia mijanona ao an-trano.
Manambara ihany koa izahay anio fa manitatra ny politikan'ny fialan-tsasatra maika izahay hatramin'ny faran'ny volana Mey mba hahazoana antoka fa manana ny fanampiana ilainao ianao rehefa tsy mahita asa.
Misaotra anao tamin'ny fanoloranao tena hanampy anao hiantoka ny Walmart sy i Sam's Club ho toerana azo antoka iasana sy hiantsenana. Miara-manolotra serivisy fitsikerana ho an'ireo vondrom-piarahamonina manerana ny firenena izahay. Mandritra io fotoana miavaka io, ny mpanjifanay sy ny mpikambana dia mila antsika bebe kokoa noho ny hatramin'izay. Misaotra anao teo noho izy ireo sy ny olon-kafa.